Izindaba - I-New Antibacterial Polyurethane isiza Ukuhamba Okunempilo
I-Antibacterial Polyurethane entsha isiza ukuhamba okunempilo
NgoSepthemba 6, i-liming research research kanye ne-Design Institute yethule imikhiqizo yesibili elwa namagciwane yezimoto, i-polyurethane automobile skylight glass edging series series, enezinto ezinhle kakhulu zokulwa namagciwane, lapho ikhishwe, yaheha ukunakwa okubanzi.
Umbiko wokuhlola ukhombisa ukuthi ukusebenza kwesikhunta esiphikisayo salolu chungechunge lwemikhiqizo kufinyelela ezingeni eliphakeme kakhulu 0, kanti isilinganiso se-antibacterial sifinyelela ngaphezu kuka-99.9%. It has omuhle kakhulu isikhunta anti nezindawo elwa namagciwane, futhi ingavimbela ukukhiqizwa kwamagciwane nomsebenzi wokukhula onqenqemeni lwewindi, ukuze kufezekiswe inhloso yokusebenza kahle kwama-antibacterial.
"Ngemuva kokuphothulwa kwenhlanganisela entsha yamasondo amasondo ayo, sithuthukise ngokuzimela omunye umkhiqizo omusha we-antibacterial - Antibacterial Polyurethane automobile skylight glass edging, nokuqhubekisele phambili izinto ezintsha ze-polyurethane ekusizeni ukuhamba okunempilo." Iphini likanjiniyela omkhulu weLiming Institute, umphathi jikelele wenkampani yokuthuthukisa i-polyurethane uZhao Xiuwen uthe.
Njengohlobo lwezinsizakusebenza ezithuthukisa ukunethezeka kwezimoto, ukukhanya kwezulu sekuye kwaba ukucushwa okujwayelekile kwezimoto zabagibeli. Kodwa-ke ukukhanya kwesibhakabhaka kutholakala endaweni yesimo sezulu ngaphandle kwemoto kanye nemvelo yokuhlala ngaphakathi emotweni, ngakho-ke inokucaciswa okuthile. Isibani esibhakabhakeni sitholakala phezulu emotweni. Ngaphansi kwesimo sokukhanya nemvula isikhathi eside, ukwakheka kwangaphakathi njengesiteshi somhlahlandlela wamanzi kuvame ukuba sesimweni somswakama, esihlinzeka ngendawo yokushisa ukukhula kwazo zonke izinhlobo zamagciwane nezikhunta. Ngasikhathi sinye, isibhakabhaka sixhumene ngqo ne-cockpit, okwandisa ubungozi bokudluliswa kwamagciwane, isikhutha nokuzwela.
Ochwepheshe bakholelwa ukuthi i-novel coronavirus pneumonia iyindlela ejwayelekile yezifo. Ukusetshenziswa kwezinto zokugoqa ingilazi elwa namagciwane kubaluleke kakhulu ekuvimbeleni ukusabalala kwamagciwane nokuvikela impilo yabagibeli.
“Uchungechunge lwe-Antibacterial Polyurethane automobile skylight glass edging imikhiqizo yimikhiqizo emisha yengilazi enqenqemeni yengilazi eyenziwe ngokufaka liming esibhedlela ngokuzimela ngokusebenzisa ubuchwepheshe be-nano antibacterial kanye nokugxila kwezinsizakusebenza eziphakeme ngesikhathi sesifo esiwumshayabhuqe uZhao Xiuwen uthe izinga lempunga lokuguga lamahora angama-500 lomkhiqizo ngu-4; ibanga lephunga lingu-3.0-3.5, elingaphambi kwebanga lomkhiqizo ofanayo lomhlaba wonke u-4.0; izimo zokuhamba nokugcinwa kwe-isocyanate eguquliwe zikhululekile kusuka ku-15 ℃ - 35 ℃ yemikhiqizo efanayo yaphesheya kuya ku-5 ℃ - 35 ℃; izinga lokuphasa lokuqala lemikhiqizo lingaphezulu kwama-98.0%, liphakeme kunama-93% wemikhiqizo efanayo yaphesheya; Izici zemishini ezinjengamandla eqine namandla okweqa izinyembezi zingaphezulu kwama-20% ngaphezulu kunalezo zemikhiqizo efanayo emhlabeni. Ukusebenza komkhiqizo wayo kudlulise ukuvivinywa kohlobo lomoto oludumile, futhi kunikezwe ngqo ezinkampanini eziningi ezikhiqiza izingxenye zezimoto.
"I-novel coronavirus pneumonia izoqhubeka nokuqiniswa ngokuzayo, futhi izofaka isandla ekuvikeleni ukusabalala kwamagciwane, ukulwa ne-new crown pneumonia kanye nokuvikelwa kwempilo yabantu." UZhao Xiuwen uthe.